Zava-mahaliana momba ny Zinc | Ny zavatra mahaliana momba ny singa simika
Zavatra mahaliana momba ny simia
Ny zinc dia akora ao ambadiky ny vokatra toy ny lotion kiranina ho an'ny hoditra mangidihidy, shampoos dandruff ho an'ny hodi-doha malemy ary deodorant tsy misy dikany.
Zava-mahaliana momba ny Zinc
Zinc dia metaly volafotsy maintso ao amin'ny sela faha-30 amin'ny latabatra rafitra maharitra. Fantatra fa mineraly tena ilaina izy io izay manampy amin'ny fitazonana ny anzima ao amin'ny vatana, ny tsy fahampian'ny zinc dia afaka mampiadana ny fitomboana ary manakana ny hery fiarovan'ny vatana. Ankehitriny, ny ankamaroan'ny zinc vokariny dia lanin'ny indostrian'ny galvanizing. Ireto misy zava-misy mahaliana 10 momba ny zinc - metaly faharoa be indrindra amin'ny vatan'olombelona aorian'ny vy.
Zinc Toerana ao amin'ny Tabilao System Periodic
10 zava-misy mahaliana momba ny zinc
1. Ny zinc dia fantatra amin'ny anarana hoe "spelter". Na dia efa ampiasain'ny olombelona hatramin'ny taloha aza ny zinc, dia tamin'ny 1746 vao nihataka tamin'ny voan'ny kalamily ny mpahay simia alemana Andreas Marggraf tamin'ny alàlan'ny fanafanana karbaona niaraka tamin'io mineraly io
2. Paracelsus - dokotera alemà soisa, alchemist ary mpanandro nahita zinc, ny anarany dia avy amin'ny teny alemà "Zinn" midika hoe "tin". Io no vy voalohany novokarina tany India tamin'ny taonjato faha-12. Hitan'i Eropa anefa io metaly io tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-16.
Zinc dia metaly volafotsy maintso
3. Ny zinc no singa faha-24 be indrindra ao amin'ny hoditry ny tany. Io no singa faha-30 be indrindra amin'ny ranomasina.
4. Fantatrao ve fa mihoatra ny antsasaky ny zinc trandrahana no ampiasaina amin'ny fametahana metaly hafa toy ny vy sy vy. Ankoatr'izay, ny zinc dia ampiasaina koa amin'ny alikaola amin'ny metaly hafa toy ny varahina (varahina - zinc) dia nampiasaina hatramin'ny andro taloha. Ho fanampin'izany, ny alikaola zinc dia ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany toy ny fantson-drano, famonoana maty ho an'ireo singa fiara sy sensor. Ny zinc dia misy ihany koa amin'ny solomasoandro, menaka manitra, beton, loko ary na propellant ho an'ny rockets modely aza.
5. Talohan'ny 1982, hanaovana vola amerikana, ny votoatin'ny varahina dia 95% ary ny zinc 5%. Taorian'ny 1982, ny vola madinika dia vita tamin'ny zinc niaraka tamin'ny 97.5% Zinc ary varahina 2.5% satria mora kokoa noho ny varahina ny zinc.
Taorian'ny 1982, ny vola madinika dia vita tamin'ny zinc niaraka tamin'ny 97.5% Zinc ary varahina 2.5% satria mora kokoa noho ny varahina ny zinc.
6. Zinc dia mineraly ilaina amin'ny sakafo mahavelona ho an'ny olombelona sy ny biby. Io no metaly fanindroany be indrindra hita amin'ny vatantsika. Amin'ny olon-dehibe, ny atin'ny zinc dia misy eo amin'ny 1.4 ka hatramin'ny 2.3 grama.
7. Ny zinc dia manampy ny hery fiarovantsika hiady amin'ny bakteria sy ny viriosy, raha ny sela kosa mila zinc hanampy amin'ny fananganana ADN. Ny vatantsika dia mila zinc hahazoana fitomboana sy fivelarana mety, izay tena zava-dehibe ho an'ny ankizy sy mandritra ny fitondrana vohoka. Ny tsy fahampian'ny zinc dia mety ho antony iray manimba ny fahitana fahitana mifandraika amin'ny taona.
Ny zinc dia manampy ny hery fiarovantsika hiady amin'ny bakteria sy ny viriosy manafika raha ny sela kosa mila zinc hanampy amin'ny fananganana ADN.
8. Afaka mahazo zinc ianao amin'ny sakafo sasany toy ny hena mena mahia (hen'omby, zanak'ondry sy atiny, hazandrano toy ny tiramaso sy akofa); Ny masomboly, voa, tsaramaso, voanjo sy amandy iray manontolo dia loharano tsara avokoa raha maniry amin'ny tany manankarena zinc.
Afaka mahazo zinc ianao amin'ny alàlan'ny sakafo sasany toy ny hena mena mahia (hen'omby, zanak'ondry ary atiny, hazandranomasina toy ny tiramaso sy akofa); Ny masomboly, voa, tsaramaso, voanjo sy amandy iray manontolo dia loharano tsara avokoa raha maniry amin'ny tany manankarena zinc.
9. Zinc carbonate dia hita tao amin'ireo pilina tranainy indrindra inoana fa mahasitrana ny fanaintainan'ny maso, hita tao anaty sambo romana rendrika tamin'ny 140 talohan'i JK.
10. Na dia takiana ilaina amin'ny fahasalamana aza ny zinc, ny zinc tafahoatra dia mety manimba, manakana ny fitrohana varahina sy vy. Ny vola amerikana dia vita amin'ny zinc 97.5% ary nisy tranga fanapoizinana zinc taorian'ny fihinan'ny olona sy ny alika ny vola madinika.
Zavatra mahaliana momba ilay zavatra mahaliana momba ireo singa simika
Zava-misy mahaliana momba ny helium Zava-misy mahaliana momba ny lithium Zava-mahaliana momba ny Beryllium Zava-misy mahaliana momba an'i Carbon Zava-mahaliana momba ny Nitrogen Zava-mahaliana momba ny Oksizena Zava-mahaliana momba an'i Neon Zava-mahaliana momba ny flluorine Zava-misy mahaliana momba ny chromium Zava-misy mahaliana momba ny vy varahina Zava-mahaliana momba an'i Gallium Zava-misy mahaliana momba an'i Nickel Zava-misy mahaliana momba ny Cobalt Zava-misy mahaliana momba ny vy Zava-mahaliana momba ny Manganese Zava-misy mahaliana momba an'i Vanadium Zava-misy mahaliana momba an'i Titan Zava-mahaliana momba ny Scandium Zava-misy mahaliana momba ny kalsioma Zava-misy mahaliana momba ny hidrogen - singa maivana indrindra amin'ny latabatra maharitra.
Zavatra iray hafa mahaliana
Fanandramana majika simia Simia amin'ny tontolo iainana Simia amin'ny fiainana andavanandro Famoronana lehibe amin'ny simia Simia malaza sy mahaliana